Ozbekistan: Ady tsangambato · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jona 2018 12:27 GMT
Tamin'ny kabariny tamin'ny lanonana fanokafana, nanasokajy ny tsangambato teo aloha ho toy ny iray maneho ny ideolojian'ny fitondrana efa nanomboka ny filoham-pirenena Ozbekistana Islam Karimov. Saingy tsy ny rehetra ao amin'ny tontolon'ny blaogy Uzbek no miombon-kevitra amin'izany fomba fijery ofisialy izany.
nashingyou namoaka sary (eto ambany) misy ny tsangambato roa – ny taloha sy ny vaovao – ao amin'ny vondrom-piarahamonina New Tashkent, ary naneho hevitra hoe:
tupizza2 nanamarika tamin'ny fanehoan-kevitra:
old-benj namaly tamim-piesoesoana [RUS]:
Bilaogera sasany kosa mahita lafiny ara-politika bebe kokoa sy fanoherana ny Sovietika (na fanoherana ny Rosiana) momba ireo hetsika ireo. pavelsheremet nanoratra hoe:
Ao amin'ny bilaogy malaza avy ao Tashkent mytashkent, александр махнёв [Alexandr Makhnev] naneho ny fahadisoam-panantenany amin'ny fomba nanoheran'ny manampahefana:
Raha ny marina, maro ireo bilaogera tsy nanantena ny hahita tsangambato hafa. Ny teboka dia taorian'ny fanesorana ny tsangambato fahiny, nampanantena ny Ambasadera Ozbeka ao Rosia, Ilkhom Nematov fa hajoro ny toeram-pahatsiarovana rehetra ny valan-javaboary ary hiverina amin'ny laoniny izany. Алекс [Alex] naneho hevitra tao amin'ny mytashkent: